Olana ara-pitiavana : Namono tena ilay rangahy
Lehilahy tanora herotrerony, 24 taona, no maty namono tena tamin’ny fandrapahana fanadody marobe, noho ny olana ara-pitiavana. Mbola mitaiza kely vavikely enim-bolana ny vadiny. Tamin’ny fotoana nahaterahan’ny vadiny no nandre siosion-dresaka ilay rangahy fa efa niteraka tamin’olon-kafa ity rennin-janany ity. Notazomin’ilay rangahy ho tsiambaratelo tany izany nandritra ny enim-bolana.
vendredi, 12 février 2016 13:22
SEFAFI : « Manotrika atody lamokany »
Manentana ny tsirairay andray andraikitra ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena, indrindra ireo mpitondra fanjakana izay ambarany fa tsy mahafa-po. Tsy mandeha mihitsy ny fiainam-pirenena, miampy ny kolikoly izay mandetika hatrany, araka ny nambaran'Andriamanjato Ralison, filoha mpitarika ny SEFAFI. Nandrafitra boky ihany koa ireo mpikambana, "La mayonnaise ne prend toujours pas" izay mirakitra ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena sy ny fanehoan-kevitra maro tamin’iny taona 2015 iny.
jeudi, 11 février 2016 23:21
Sambava : Lavanila maitso 300kg nisy nitango teny an-tanimboly
Lavanila maitso, manodidina ny 300kg no nanjavona teny an-tanimboly tao Ambohitrakongona Kaominina ambanivohitr’i Sambava. Raha iny handeha hiasa ireto tantsaha no taitra raha nahita fa voatsongo na nisy nioty sahady ny volin’izy ireo. Tantsaha efatra no lasibatra tamin’izany. Tonga nijery ny zava-nisy ny Lehiben’ny Fokontany, Bejoma Modeste, ary nitondra fitarainana tamin’ny mpitondra ao amin’ny Faritra mba hijery ny fomba hiarovana ny sehatra lavanila fa efa manjaka sahady ny halatra ka mandry andriran’antsy ny mpamboly.
jeudi, 11 février 2016 01:22
Tanambao Daoud – Sambava : Mirongatra ny aretina ambalavelona
Manomboka very fanahy mbola velona toy ny valala tapak’elatra ireo Ray aman-drenin’ny mpianatra any amin’ny Kaominina ambanivohitra Tanambao Daoud, Distrikan’i Sambava fa efa ampolony ireo zaza mihetsika aretina ambalavelona. Efa roa herinandro izao io trangan’aretina hafahafa io, fa tsy mety foana. Omaly izao dia mpianatra amin’ny CEG indray no lasibatra raha mbola tany amin’ny EPP no nisantatra izany. Rehefa voa ny ankizy iray ao ampianarana dia misavoritaka ary raiki-tahotra avokoa ny sisa tavela. Nanezaka ihany ireo mpitondra fivavahana sy ny mpiandry fa mbola tsy misy fanafany ny aretina. Sahiran-tsaina ny Ray aman-dreny any Tanambao Daoud, miantso fanampiana mba handresena ity aretina hafahafa ity.
mardi, 09 février 2016 21:35
Jirama Sambava : Mitsipaka marindrano ny fanasoketana azy
Mampitaraina ny mpanjifa ny tsy fitovian’ny fitsinjarana ny herinaratra isaky ny kartie ao Sambava. Misy tsy mahazo jiro mihitsy ao anatin’ny efatra alina misesy, misy anefa ireo tokantrano tsy azo tapahina mihitsy ny jiro ao aminy.
lundi, 08 février 2016 13:35
ACMIL Antsirabe : Mifandimby tonga ny diplaomaty vahiny
Nitsidika ny sekolin’ny manamboninahitra Akademia Miaramila Antsirabe io atoandro io ny mpiandraiki-draharaha ao amin’ny ambasadin’i Alemaina, Atoa Karl Prinz. Anton’ny fitsidihana dia noho ny fanavaozana ny rafitra fanofanana ireo manamboninahitra malagasy.
vendredi, 05 février 2016 15:53
Inanantonana – Betafo : Nodoran’ny Fokonolona ny biraon’ny Kaominina
Tsy nankasitrahan’ny vahoakan’i Inanantonana, Distrika Betafo ny fanoloana ny Ben’ny tanana lanim-bahoaka ka noterana sy nosoloina ny Ben’ny tanana teo aloha, izay tsy lany intsony na dia nilatsaka tamin’ny anaran’ny HVM, antokon’ny fitondrana aza. Efa nisy ny lanonana fametrahana samboady ireo Ben’ny tanàna rehetra voafidy nanerana an’i Vakinankaratra, nandritra ny fitsidihana nanokafana ny “Festival Zovy” saingy tato aoriana, ny 09 Desambra 2015 indray dia nisy ireo nesorin’ny Fitsarana tao Vakinankaratra ka isan’izany ity tao Inanantonana ity.